European Njem: Mere njem Were ụgbọ oloko na bụghị ụgbọ elu | Save A Train
Home > Travel Europe > European Njem: Mere njem Were ụgbọ oloko na bụghị ụgbọ elu
Ụzọ ka mma na-eji oge gị n'oge okpomọkụ karịa njem gburugburu Europe, nri? Right. Ị na-adịghị na-agbaji akụ ịhụ ụfọdụ nke ọmarịcha Europe n'isi obodo; kwere na ya ma ọ bụ na, ma onye nke oké egwu akụkụ nke gị na-eri-irè Europe njem na-ahọrọ ụgbọ oloko kama ụgbọ elu gị na ebe.
ebe a na- 5 mere chọrọ ịbanye ụgbọ oloko kama ụgbọ elu ga-enyere gị na-enwe Europe n'ụzọ kasị mma na o kwere omume.
Ndi gaghị ghọgburu echiche na London-Paris Eurostar na France TGV ụgbọ oloko bụ naanị elu-ọsọ okporo ígwè pụrụ isiwo Europe - maka gara aga ole na ole ọtụtụ iri afọ, ndị a ụmụ okorobịa nwere e-emepe emepe elu-ọsọ ụzọ gasị ofụri Afrika, inye onyinye iji na-abawanye nke ụgbọ okporo ígwè njem na-eme ka n'aka na ụgbọ oloko kama ụgbọ elu ina ẹmende dị ka isi na-ejegharị ejegharị nhọrọ. on nkezi, elu-ọsọ ụgbọ oloko na Europe njem 125 ka 200 mph, dabere na-aga na n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-fabulously interlinked.
Azụ Kama ụgbọ elu dị ka Ọsọ ọsọ nhọrọ
Ha pụrụ ọbụna ịdị na-agbakarị na-efe efe, karịsịa maka njem ogologo karịa banyere 600 kilomita. Kedu otu ọ bụ? Mgbe ị na-gbakọọ na oge ị na-eji ịnya ụgbọ n'ọdụ ụgbọ, mgbe na-e n'oge (mgbe na-emefu ihe karịrị 2 awa tupu gị ụgbọ elu), na-agụsi nche akwụkwọ ndenye, ị na-aghọta na ọ dị mfe iji ụgbọala etiti obodo ụgbọ okporo ígwè na osisi 5 nkeji tupu ụgbọ okporo ígwè doo ebe.
Amsterdam na Lille Ụgbọ oloko
Ị Lezienụ Naa N'ihi a Top-notch sleeper Service Than a mbụ na klas ụgbọelu Ticket
Ọbụna mgbe ị na-ejegharị ejegharị na ndị kasị dara oké ọnụ ụgbọ oloko, ị ga-esi otú ahụ a ngosi price. Ị ga-eche ihe mere na ị ga-amasị a na-ezere ụgbọ okporo ígwè eme njem tupu! Dị ka ọmụmaatụ, ị ga-akwụ ụgwọ gburugburu £ 880 kwa onye maka a abụọ ụbọchị / otu abalị njem na Japan si Seven Stars, na-enwe na lush odida obodo ndị dị n'ebe ndịda Japanese n'àgwàetiti Kyushu dị ka ị na-eme njem; megidere na price, a ụgbọelu tiketi site London na Tokyo ga-eri gị fọrọ nke nta ka £ 5,000 na British Airways. Woah! Anyị nwere mmetụta na ị ga-ahọrọ ụgbọ oloko kama ụgbọ elu si ugbu a, agaghị ị?
Echefuola na akpa bụ (fọrọ nke nta) Unheard Of when comparing Trains Instead of Planes
Echefuola na ibu bụ ihe nke a ihe na-ama, dịkarịa ala mgbe ọ na-abịa anya ụgbọelu na-ejegharị ejegharị. N'adịghị ka na, n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ okporo ígwè na-adịghị ida njem akpa dị ka njem naanị ndị na-enwe nchegbu banyere ha onwe ha ibu. I nwekwara ike-eme ka ihe dị ka i nwere ike na-ebu, n'adịghị ụgbọ elu nwere doro anya akpa na-agaghị emeli.
Nke a bụ eleghị anya ndị kasị mma ihe mere iji ụgbọ oloko kama ụgbọ elu.
Salzburg na Berlin Ụgbọ oloko
I nwere ike ikwu na Hell of Airport Security
Mgbe ọ na-abịa nche, ị na-ahọrọ ụgbọ oloko kama ụgbọ elu yiri ka a ezi uche na-ahọrọ, na ị ga-ahụ ugbu a mere. The nchebe n'ọdụ ụgbọelu na ahụmahụ bụ isi a na usoro nke wetara ọnọdụ. Ị malite ọsụsọ na-agba tupu ị ga-esi n'ime nche ego bụ ezie na ị maara na ị mere ma ọ bụ wetara ihe ọ bụla megidere iwu na ị. na, , ka anyị ghara ichefu wetara arịrịọ iji wepu gị belt, gbapụ akpụkpọ ụkwụ gị na whatnot, na-ahụ ga-patted ala site a burly nwoke. Ụgbọ oloko na-adịghị nke a - na na mara mma nke ukwuu akàrà ndibiat.
Chọgharịa na Zọpụta-A-Train ka akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè na-ọkacha mmasị gị ebe, na na ndị dị ọnụ ala udu! Echefu ihe niile banyere ntinye akwụkwọ ụgwọ na ịnabata mfe 3-nkeji ntinye akwụkwọ usoro online.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-trip-trains-planes%2F%0A%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#ụgbọelu #railtravel ụgbọelu planetravel ụgbọ okporo ígwè Train Travel